Ciidamada dowladda oo howlgal ka sameeyay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir - Wardeeq 24 TV Ciidamada dowladda oo howlgal ka sameeyay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Ciidamada dowladda oo howlgal ka sameeyay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir
Ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya ayaa xalay waxaa howlgallo amniga lagu xaiijinayay, isla markaana dad badan lagu qabqabtay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan Gobolkan Banaadir.
Howlgalka oo inta badan laga sameeyay Xaafado ka tirsan muqdisho ayaa Ciidamada waxaa ay beegsanayeen Guryaha gar ah oo bartilmaameed u ahaa, kuwaas oo dad badan ay kasoo xir xireen.
Taliye kuxigeenka labaad ee Ciidanka Booliska Soomaliyeed Sakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in howlgalka ay Ciidamada Booliska kusoo qabteen dad farabadan oo ahaa kuwo isticmaalayay kana Ganacsanayay waxyaabaha maanka dooriya.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in howlgalka Ciidamada ay iga jawaabayeen cabasho uga timid qaar kamid ah Shacabka Magaalada Muqdisho oo xaalad amni darro ka sheeganayay.
“ Taliska Boliiska G/Banadir iyo Maamulka G/Banadir oo is kaashanaaya kana jawaabaya cabasho ka timid bulshada ayaa howlgalo ka fuliyay dhamman degmooyinka G/Banadir howlgalkaas oo lagu soo qabtay dadka mandooriyaadka isticmaala iyo ka ganacsada, howlgaladaan waxeey ka jawaabayaan cabashooyinka ay bulshada ku soo gudbiyeen Madasha Ila Wadaag, Qadka 991 iyo cinwaanada bulshada ay si toos ah oogala xiriir karaan Ciidanka Boliiska ayay tiri” Taliye Sakiya.
Howlgalkan ay Ciidamada Booliska Soomaliya xalay ka sameeyeen degmooyin badan oo ka tirsan Gobolkan Banaadir ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli todobaadyadii la soo dhaafay Shacabka Muqdisho qaarkood ay ka cabanayeen kooxo hubeysan oo dadka ka dhacaya Mobeeladooda.
Previous articleWarbaahinta Madax Banan Ee Wardeeq News War La Hubo Oo Sal Iyo Raad Leh Kal Soco Wardeeq News Ama Idaacadda Wardeeq
Next articleWasaarada Caafimaadka Oo Shaacisay Kiisas Badan Cudurka Covid-19 Oo Dalka Laga Helay